Sendoso: Kurudzira Engagement, Kuwana, uye Kuchengeta neDirect Mail
China, June 11, 2020 Chishanu, June 12, 2020 Douglas Karr
Pandakashanda pane hombe SaaS chikuva, imwe nzira inoshanda yataishandisa yekufambisa rwendo rwevatengi kumberi kwaive nekutumira yakasarudzika uye yakakosha chipo kune edu tarisiro vatengi. Nepo mutengo wekutengesa wanga uchidhura, iko kudyara kwaive nekudzoka kunoshamisa mukudyara. Nebhizinesi rekufamba pasi uye zviitiko zvakamiswa, vatengesi vane dzimwe sarudzo shoma kuti vasvike tarisiro yavo. Pasina kutaura nezvekuti makambani ari kutyaira ruzha rukuru kuburikidza
Zvemagariro ndezve anotungamira mushandirapamwe wekumiririra uye wepagariro kutengesa chikuva icho chinopa vatengi vayo neavhareji ye1,750 yekubatana pamushandi, 200% kuwedzera mupombi dzekutengesa, 48% yakakura dhizaizi saizi, 4x kuwedzera mukuziva kwechiratidzo, uye pagumi chegumi mutengo we akabhadhara mapurogiramu ezvehupfumi. Nei Vashandi Vachimiririra? Yese kambani ine simba, isina kuvharwa sosi ine mukana wekusimudzira kushambadzira, kutyaira kutengesa & kupa simba HR; izwi nema network evashandi vako. Zvichitaurwa zviri nyore,
Chitatu, Nyamavhuvhu 22, 2018 Eric Holtzclaw
Mumazuva ekare ekushambadzira, kumashure mukutanga kwema2000, maCMO mashoma akashinga akaisa mari mune zvimwe zvishandiso zvakagadzirirwa kubatsira zvirinani kubata kwavo mushandirapamwe uye vateereri. Aya mapiyona akasimba akatsvaga kuronga, kuongorora uye kugadzirisa mashandiro, uye nekudaro akagadzira yekutanga yekushambadzira tekinoroji- masisitimu akasanganiswa akaunza kurongeka, kukiyinura yakanangwa mishandirapamwe, uye meseji yakasarudzika yemigumisiro iri nani. Tichifunga nezvekuti indasitiri yekushambadzira yakasvika sei mumakore mashoma apfuura iri